Care Diary | The app created for you, for me and for society.
ဆေးဆိုင် လော့ဂ်အင် အခြား(oxygen,clinic)လော့ဂ်အင် lang.website
Region Select Kachin_ကချင်ပြည်နယ် Kayah_ကယားပြည်နယ် Kayin_ကရင်ပြည်နယ် Chin_ချင်းပြည်နယ် Sagaing_စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Tanintharyi_တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Magway_မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Mandalay_မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Mon_မွန်ပြည်နယ် Rakhine_ရခိုင်ပြည်နယ် Yangon_ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Ayeyarwady_ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Nay Pyi Taw_နေပြည်တော် Bago_ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး Shan_ရှမ်းပြည်နယ်
Address: အနော်မာရပ်ကွက်,သာကေတမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Contact: 09 42100411909 507744609 420259094(နေ့လည် ၁၂ နာရီ)
Updated at9months ago by Care Diary 1
Address: အမှတ် ၁၅ရပ်ကွက် အောင်တေဇလမ်းနှင့်အောင်သပြေလမ်းထောင့်၊ပခုက္ကူ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
Contact: ဖုန်း 092521578787.8.21အတွက် လာရောက်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်
Updated at9months ago by htethtethlaing
Address: ၁/၁၆၊ ရန်ကုန်-မန်းလေးလမ်း၊ကန်ဦးရပ်ကွက်၊ပျဉ်မနားမြို့။ နေပြည်တော်
Contact: &nbsp;အိုးလေဖြည့် (Free)ကိုလင်းခိုင် အောက်ဆီဂျင်(တစ်ဦးတည်းသီးသန့်)နေပြည်တော် ၊ ပျဥ်မနားမြို့။📞067 22653, 📞067 22654,&nbsp;📞09 7792407710L, 15L, 20L (Available)&nbsp;မနက်ပိုင်းတွေပေးသည်။ မနက်ဖြန် မသေချာသဖြင့် ph ဆက်ပြီးမှ သွားကြပါရန်။ ကုန်တဲ့အချိန် ရပ်မှာပါ။Update Time -6 Aug, 8:00PMOnly 7.8.21
Updated at9months ago by maythingyan
မိဘဂုဏ် အောက်ဆီဂျင်ဆိုင် ဖုန်းမဆက်ရသေး
Address: ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ဒေါနခြံရပ်ကွက် ၊တော်ဝင်ဦးဆေးရုံအနီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Contact: အလှူရှင်&nbsp; ဖခင်ကြီး ဦးညွန့်လှိုင် (၅)နှစ် ပြည့်အား ရည်စူး၍ ကိုဝေယံမိုး မကြည်ကြည်ဝင်း မိသားစု အလှူတော််#oxygen16july#oxygen17july#oxygen18july#oxygen19july#oxygen20july#oxygen21july#oxygen22july#oxygen23july#oxygen24july#oxygen25july#oxygen26july#oxygen27july#oxygen28july#oxygen4August1.8.2021ထိ oxygenဖြည့်ပးးပါသည်။
Updated at9months ago by eieikhaing
Address: Hlaing Yadanar St., Dhama Thukha Dhamar Yone, Ward (13), Hlaing Thar Yar, Yangon , Myanmar. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Contact: 09 5033115 09 43114919
အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ သွေးနှင့် အောက်ဆီဂျင်အခမဲ့ ကူညီမှုအသင်း ဖုန်းမဆက်ရသေး
Address: သထုံမြို့ မွန်ပြည်နယ်
Contact: 09 25591504509 4535644109 267904455
အဖြူရောင်ပီတိ လူမှူကူညီရေးအသင်း ဖုန်းမဆက်ရသေး
Address: ငါးထပ်ကြီးတောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Contact: ဦးလှထွန်း (09799881592), ဦးကျော်နိုင် (09794690062), ဦးသိန်းစိုး (0979847267)
Updated at9months ago by Yangon Team
Address: ကျောတိုက်ကျောင်း ခေမာသီဝံပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ဂန့်ဂေါမြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
Contact: ဖုန်းနံပါတ် 097611890353.8.21အတွက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ရွှေသိမ်တော် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖုန်းမဆက်ရသေး
Address: ဧရာဝတီတံတား(ပခုက္ကူ)အနီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
Contact: ရွှေသိမ်တော်ဆရာတော်&nbsp;ဦးစန္ဒောဘာသ&nbsp;09-77770520509-74856030Oxygen စက်ရောက်ရှိပြီဖြစ်သဖြင့် 3.8.21အတွက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Copyright © 2022 Care Diary. All rights reserved.